NDI UWE OJII NA-ACHỤ NTA NDI ASHAWO N’ANAMBARA – hoo!haa!!
NDI UWE OJII NA-ACHỤ NTA NDI ASHAWO N’ANAMBARA
Na ngwụchaa izu ụka gara aga, ndi uwe ojii na steeti Anambara chụrụ nta ma jidekwa ụmụ nwanyị ana-ama imi na ha bụ ndi ashawo ruru otu naarị mmadụ na mmadụ iri abụọ. Ejidekwara ụmụ nwoke ụfọdụ bụ ndi ana-ama imi dịka ndi na-agba ha aka ahịa.
Ndi uwe ojii a gagharịrị n’ihe dịka elekere asatọ n’ọkara nke anyasị, ụbọchị Satọdee gara aga ma nwụchikọọ ọtụtụ ụmụ nwanyị ashawo nakwa ụmụ nwoke ndi na- akụrụ ha ekwe mgba n’Amọọbịa nke dị n’okpuru ọchịchṅ ime obodo ọdịda anyanwụ Ọka.
Mbọ niile agbara ịkpọtụrụ ọnụ na-ekwuru ndi uwe ojii nke steeti Anambara bụ Mohammadu Haruna mara afọ n’ala ebe ọbụ na onwenwughị ike iza ọkpụkpọ a kpọrọ ya n’ekwe ntị. Ka o sina dị, otu onye uwe ojii nke na-achọghị ka a kpọọ aha ya maka na onwghị ikikere ikwuchitere ndi uwe ojii, sịrị na nke a bụ ihe mere eme. Mana onye a enweghị ike ịkọmi akọmi ka owu si gaa n’anya aga.
Ndi uwe ojii a gagharịkwara na ụlọ nkwari ụfọdụ dị na Mgbakwụ, Nise nakwa Ogidi di n’okpuru ọchịchị ime obodo mgbago Idemili, bụ ebe ha jidere ihe ruru ndi ashawo nwoke na nwanyị iri isii.
N’otu aka ahụ, akụkọ kwuru na emekwara ngagharị ichụ nta ndi ashawo a n’Amansii, Ụmụnze, Ọnịcha nakwa Ihiala.
Onye a anyị dọbitere ọnụ mmiri okwu ya sịrị na ya kwadoro ụdị ọrụ a ndi uwe ojii na-arụ n’ihi na nke a ga-enye aka ịkwụsịnata ikesa ọrịa mmịnwụ bụ AIDS, mana ọ kwara arịrị na ụmụ nwanyị a jichaa ihe ruru puku naira iri wee gbapụta onwe ha ma laghachikwa n’ọrụ ha. Ọ sịrị n’ọdị nwute na ndi uwe ojii hapụrụ iji nke a gbaa mbọ igbochi ajọ ebim ndụ ma were ya mere achụm nta ego.
Previous Post: AGA-AKWUGBU NDI UWE OJII ANỌ NA STEETI AKWA IBOM
Next Post: K’anyị Lebaa anya na agwụgwa(RIDDLES), ma kọwaa uru agwụgwa bara
Hmm, ọrụ ha dịkwa mma. Mana ijide ndị ojiegbeezu bụ nke magburu onwe ya.